Nonmetal သတ္တုတွင်းပစ္စည်း - တန်ဇန်းနီးယားနယ်
ကနေဆောင်းပါး: Nonmetal သတ္တုတွင်းပစ္စည်း | | အချိန်: ဇူလိုင်လ, 2013 | tag ကို: Nonmetal သတ္တုတွင်းပစ္စည်း
ဂီနီမြစ်ကျောက်စရစ်ခဲမြစ်ကျောက်စရစ်ခဲရောင်းချမည့်ဂီနီမြစ်ကျောက်စရစ်ခဲသဲစက်များတွင်မြစ်ကျောက်စရစ်ခဲရောင်းရန်သဲစက်တစ်ခု, ဝတ်ဆင်ယဉ်, ခက်ဓာတုဗေဒတည်ငြိမ် silicates သတ္တုဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများဖွဲ့စည်းရေးအရ, မှတ်၏အထူရှိအလွန်မြင့်မားဆီလီကွန်အကြောင်းအရာကျောက်များဖြစ်ပါသည်, မြစ်ကျောက်စရစ်ခဲအခြေခံအားဖြင့် basalt ထက်လင်းကျောက်, feldspar, အချို့မြစ်ကျောက်စရစ်ခဲခိုင်မာသော၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း, ကျောက်, အခြို့မြစ်ကျောက်စရစ်ခဲခက်များမှာ ... ဆက်ဖတ်ရန်...
ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြုထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုကျောက်စရစ်များနှင့်ကျောက်စရစ်အတွက်ရောင်းချမြစ်ကျောက်စရစ်သဲချမှတ်ခြင်းစက်များအတွက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မြစ်ကျောက်စရစ်သဲချမှတ်ခြင်းစက်နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသုံးအမျိုးအစားခွဲခြားထားပါသည်: Ⅰခွန်အားတန်း C60 ကွန်ကရစ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်အတွက်အသုံးပြုရပါမည်; Ⅱခွန်အားတန်း C60 အတွက်အသုံးပြုရပါမည် - C30 အနေနဲ့အင်တိဖရိစ်ဓါတ်ကွန်ကရစ် impermeability နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များကို; Ⅲ, လျော့နည်း C30 ထက်ကွန်ကရစ်အစွမ်းသတ္တိကိုအတန်းများအတွက်အသုံးပြုရပါမည်။ Rive ... ဆက်ဖတ်ရန်...
Quartz pulverizer နှင့်ရောင်းမည်လင်းကျောက်သဲထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်
Quartz pulverizer နှင့်ရောင်းချ Quartz pulverizer နှင့်လည်း silica အဖြစ်လူသိများလင်းကျောက်သဲထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်လင်းကျောက်လုပ်ကွက်များအတွက်လင်းကျောက်သဲထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကုန်ကြမ်းလင်းကျောက်သဲထုတ်လုပ်မှု (စ silica သဲအဖြစ်လူသိများ), ဒါပေမယ့်လည်းလင်းကျောက်ဆန့်ကျင်ဘက်နှင့် ferrosilicon ကုန်ကြမ်းပစ်ခတ် ။ လင်းကျောက်သဲလင်းကျောက်ကြောကျကိုလင်းကျောက်အစေ့ကြိတ်ခွဲခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်။ လင်းကျောက်သဲကျယ်ပြန့်ဖန်, foundry, ce များတွင်အသုံးပြုအရေးပါသောစက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းဖြစ်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်...
ရောင်းရန် artificial ကျောက်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းထုတ်လုပ်မှုစက်
အဆိုပါတူးဖော်ရော့ခ်ဟာအပြောင်းအလဲနဲ့ site ကိုမှသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ဖြစ်ပါတယ်ရောင်းချ artificial ကျောက်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းထုတ်လုပ်မှုစက်စျေးဆောက်လုပ်ရေးသောကျောက်ကျောက်မိုင်းအပြောင်းအလဲနဲ့စက်ရုံအတွက်အတုကျောက်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းထုတ်လုပ်မှုစက်။ အဆိုပါပစ္စည်းပြီးတော့နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရခြင်းဖြစ်သည်။ ဘိလပ်မြေ၏ဒီဂရီအပေါ် မူတည်. ကြိတ်ဆုံအတော်ကြာအဆင့်လိုချင်သောအရွယ်အစားလျှော့ချရေးအောင်မြင်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ Gyratory နယ်, မေးရိုးနယ်, လိပ်နယ်နှင့်သက်ရောက်မှုစက်များမူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်...
Tamilnadu ခုနှစ်တွင်ရောင်းချရန် artificial သဲလုပ်ခြင်းစက်
နို့တိုက်ကျွေးပစ္စည်းကိရိယာများ + မူလတန်းကြိတ်ဆုံ + အလယ်တန်းကြိတ်ဆုံ + ဆန်ခါစစ်ခွဲခြားကိရိယာများ + လြားစကျခါး + ထိန်းချုပ်မှုစနစ်က: အတုသဲထုတ်လုပ်မှုလိုင်းလူကြိုက်များသောထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 1 နှိမ်နင်း Tamilnadu ရေပန်းစားသောကျောက်ခုနှစ်တွင်စက်ပြုလုပ်ခြင်း Tamilnadu artificial သဲများတွင်ရောင်းချဘို့စက်ပြုလုပ်ခြင်း။ ဒီထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်အသုံးပြုဘုံသုံးကျောက်စရစ်ကြိတ်ခွဲစက်ကိရိယာများဒါအပေါ်မျက်နှာပြင်, ခါးပတ်ပေါ်ကိုနှင့်တုန်ခါ, လမ်းခွဲတုန်ခါ, PE မေးရိုးနယ်, Pew မေးရိုးနယ်, PF သက်ရောက်မှုနယ်, HP ကကန်တော့ချွန်နယ်ဖြစ်ကြသည်။ တခါတလေ ... ဆက်ဖတ်ရန်...